User:ေအာင္ေက်ာ္စိုး - ဝီကီပီးဒီးယား
(1988-10-30) ၃၀ အောက်တိုဘာ၊ ၁၉၈၈ (အသက် ၃၀)
ယနေ့သည် – ၁၅ အောက်တိုဘာ ၂၀၁၉
အမည်မှာ အင်္ဂလိပ်ဘာသာAung Kyaw Soe ဖြစ်ပြီး မြန်မာ: အောင်ကျော်စိုး ဖြစ်ပါသည်။ လူမျိုးစုမှာ ဗမာလူမျိုး ဖြစ်ပြီး ကိုးကွယ်တဲ့ဘာသာကတော့ ဗုဒ္ဓဘာသာ ပဲဖြစ်ပါတယ်။ မြန်မာ နိုင်ငံသား ၁ ဦးဖြစ်ပြီး ၁၉၈၈ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလ၊ ( ၃၀ ) ရက်နေ့စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး ၊ ရွှေဘိုခရိုင် ၊ ရွှေဘိုမြို့နယ် မှာမွေးဖွားခဲ့ပါတယ်။
အင်တာနက် ကို ၂၀ဝ၇ ခုနှစ်တွင် စတင်အသုံးပြုခဲ့ပြီး MIRC, Gtalk, Facebook တို ့ကို ပထမဆုံးထိတွေ ့ခွင့်ရခဲ့ပါတယ်။ အဲ့ဒီအချိန်က Social Website အဖြစ် အသုံးပြုသူများတဲ့ Ning ဆိုက်တွေပေါ်မှာ အချစ်နတ်သားလေး၊ ရွာသူကြီး၊ အောင်ကျော်စိုး၊ Aung Kyaw Soe ဆိုတဲ့အမည်တွေနဲ ့ကျင်လည် ကျက်စားဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ ၂၀ဝ၈ - ၂၀ဝ၉ ခုနှစ်မှာ "တောရွာကလေး"၊ "ပန် ့ခ်သရဲ အီမိုသရဲလေးတို ့ဆုံဆည်းရာ" ဆိုတဲ့ ကိုယ်ပိုင် ဆိုရှယ် ဆိုက်များကိုတည်ထောင်ဖြစ်ခဲ့သလို "ကဗျာချစ်သူ" ဆိုတဲ့ Blogger Website တစ်ခုကိုလည်း စတင်တည်ထောင်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ် အဲ့ဒီအချိန်ကစလို့ယနေ ့အချိန်အထိ Blog ဝက်ဘ်ဆိုက် ပေါင်းများစွာကို ကိုယ်တိုင်အသုံးပြုရန်အတွက်ရော အခြားသူများအတွက်ပါ ပြုလုပ်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ ၂၀ဝ၄ ခုနှစ်မှ ၂၀၁၀ ခုနှစ်အထိ Decoration ကုမ္ပဏီတစ်ခုမှာ ဝင်ရောက်လုပ်ကိုင်ခဲ့ပြီး ၂၀၁၀ ခုနှစ်မှ ၂၀၁၂ အထိ အစ်ကိုရဲ့လုပ်ငန်းမှာ ကိုယ်တိုင်ဦးစီးပြီး ဝင်ရောက်လုပ်ကိုင်ခဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ ၂၀၁၂ ခုနှစ်မှ ယနေ ့အထိ ပြည်တွင်း ပုဂ္ဂလိက ကုမ္ပဏီကြီးတစ်ခုမှာ IT ပိုင်းနဲ ့ICT ပိုင်းကို တာဝန်ယူပြီး လုပ်ကိုင်လျှက်ရှိပါတယ်။
Social Network အသုံးပြုမှု တွင်ကျယ်လာတာနဲ ့အမျှ နည်းပညာကို အလွဲသုံးစားပြုမှုများ များစွာပေါ်ပေါက်လို ့လာပါတယ် အဲ့ဒီလို အလွဲသုံးစားပြုမှုကြောင့် နစ်နာသူများကို တတ်နိုင်သလောက်လိုက်လံကူညီပေးလေ့ရှိသလို နည်းပညာပိုင်းကို နားမလည်ကြသူများကို Security ပိုင်းဆိုင်ရာများကို သိရှိနိုင်ကြစေဖို ့လိုက်နာနိုင်ကြဖို့လက်တွေ ့လုပ်ဆောင်နိုင်ကြစေဖို့နည်းပညာနဲ ့ပတ်သက်သည်များကို မကြာခန Knowledge Sharing ပြုလုပ်ပေးလျှက်ရှိပါတယ်။
1. ပထမဆုံးအကြိမ်အဖြစ် MRTV-4 မှ TV Program တစ်ခုဖြစ်သည့် Let's Talk ဆိုတဲ့ Talk Show အစီအစဉ်လေးမှာ Facebook Account Hack ခံရသူများနဲ ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေကို Knowledge Sharing ပြုလုပ်ပေးခဲ့ပါတယ်။ ၁၁.၈.၂၀၁၈ နေ ့မှာ MRTV-4 ကနေ ထုတ်လွှင့်ပြသပေးခဲ့ပါတယ်။ ( ပြန်လည်ကြည့်ရှုရန်။ )
2. ဒုတိယအကြိမ်အဖြစ် MRTV-4 မှ TV Program တစ်ခုဖြစ်သည့် Mingalarbar - မင်္ဂလာပါ ဆိုတဲ့ Talk Show အစီအစဉ်လေးမှာ Facebook Account Security ပိုင်းနဲ ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေကို Knowledge Sharing ပြုလုပ်ပေးခဲ့ပါတယ်။ ၂၁.၈.၂၀၁၈ နေ့မနက်မှာ MRTV-4 ကနေ တိုက်ရိုက် LIVE ထုတ်လွှင့်ပြသပေးခဲ့ပါတယ်။ ( ပြန်လည်ကြည့်ရှုရန်။ )
3. တတိယအကြိမ်အဖြစ် MRTV-4 မှ TV Program တစ်ခုဖြစ်သည့် Mingalarbar - မင်္ဂလာပါ ဆိုတဲ့ Talk Show အစီအစဉ်လေးမှာ Facebook , Youtube , အပါအဝင် အခြား နည်းပညာနဲ ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေကို Knowledge Sharing ပြုလုပ်ပေးခဲ့ပါတယ်။ ၂၈.၈.၂၀၁၈ နေ ့မနက်မှာ MRTV-4 ကနေ တိုက်ရိုက် LIVE ထုတ်လွှင့်ပြသပေးခဲ့ပါတယ်။ ( ပြန်လည်ကြည့်ရှုရန်။ )
4. စတုတ္ထအကြိမ်အဖြစ် MRTV-4 မှ TV Program တစ်ခုဖြစ်သည့် Mingalarbar - မင်္ဂလာပါ ဆိုတဲ့ Talk Show အစီအစဉ်လေးမှာ Facebook , Youtube , အပါအဝင် အခြား နည်းပညာနဲ ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေကို "Facebook Page မှာ Organic Reach များအောင်ဘယ်လိုလုပ်သင့်သလဲ" ခေါင်းစဉ်ဖြင့် Knowledge Sharing ပြုလုပ်ပေးခဲ့ပါတယ်။ ၂.၁၀.၂၀၁၈ နေ ့မနက်မှာ MRTV-4 ကနေ တိုက်ရိုက် LIVE ထုတ်လွှင့်ပြသပေးခဲ့ပါတယ်။ ( ပြန်လည်ကြည့်ရှုရန်။ )
5. ပဉ္စမအကြိမ်အဖြစ် MRTV-4 မှ TV Program တစ်ခုဖြစ်သည့် Mingalarbar - မင်္ဂလာပါ ဆိုတဲ့ Talk Show အစီအစဉ်လေးမှာ ကလေးတွေနဲ့IT ပစ္စည်းတွေကို ဘယ်လိုပေးသုံးသင့်တယ်၊ ဘယ်လိုစောင့်ကြည့်၊ ထိန်းချုပ်သင့်တယ်ဆိုတာလေးတွေကို ကလေးရှိတဲ့ မိဘတိုင်း သိရှိနိုင်ကြစေဖို ့"ကလေးတွေ IT ပစ္စည်းဆိုင်ရာတွေကို ဘေးဥပါဒ်ကင်းကင်းနဲ့ အကျိုးရှိအောင် အသုံးပြုတတ်စေဖို့" ခေါင်းစဉ်ဖြင့် Knowledge Sharing ပြုလုပ်ပေးခဲ့ပါတယ်။ ၂၇.၁၁.၂၀၁၈ နေ ့မနက်မှာ MRTV-4 ကနေ တိုက်ရိုက် LIVE ထုတ်လွှင့်ပြသပေးခဲ့ပါတယ်။ ( ပြန်လည်ကြည့်ရှုရန်။ )
6. ဆဋ္ဌမအကြိမ်အဖြစ် MRTV-4 မှ TV Program တစ်ခုဖြစ်သည့် Mingalarbar - မင်္ဂလာပါ ဆိုတဲ့ Talk Show အစီအစဉ်လေးမှာ "Page နှင့်Facebook Account တွေမှာ Blue Mark ရအောင်ပြုလုပ်နည်း" ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်လေးနဲ့လိုချင်တိုင်းမရနိုင်သလို ပိုက်ဆံနဲ့ပေးဝယ်ပြီးမလုပ်နိုင်သော Blue Mark ရအောင်ပြုလုပ်နည်း၊ Facebook Account ခိုးခံရခြင်းနှင့် Hack ခံရခြင်းမဖြစ်ရလေအောင်ပြုလုပ်သင့်သောအချက်များနှင့် သူများမသုံးနိုင်အောင် လုံခြုံတဲ့ Password ပေးနည်းများ၊ Facebook Account တွေကိုခိုးယူပြီး ငွေကြေးလိမ်လည်မှုတွေရှိနေတဲ့အတွက် အဲ့ဒီလိုလိမ်လည်မှုမျိုးတွေနဲ ့မကြုံတွေ ့ရလေအောင် ဆောင်ရန်၊ ရှောင်ရန်နည်းလမ်းလေးတွေကိုပါ Knowledge Sharing အနေနဲ့မျှပေးပေးဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ ၁၉.၂.၂၀၁၉ နေ့မနက်မှာMRTV-4 ကနေ တိုက်ရိုက် LIVE ထုတ်လွှင့်ပြသပေးခဲ့ပါတယ်။ ( ပြန်လည်ကြည့်ရှုရန်။ )
( လင့်ချိတ်ချင်းများ ဖြည့်စွက်ခြင်းများ ထပ်မံပြုလုပ်သွားပါဦးမည်။ )
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=User:ေအာင္ေက်ာ္စိုး&oldid=450934" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၂၀ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၁၉၊ ၀၆:၅၈ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။